150W Dusk to Dawn Led Parking Garage Light China Manufacturer
Nkọwa:Dusk na Dawn Led Garage Light,Enwetara ọkụ n'èzí,Ebube ụgbọala na-ebugharị na Motion Fee
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 150W Dusk to Dawn Led Parking Garage Light
Nke a na Dusk to Dawn Led Garage Light edepụtara maka ngwa 100-277V ma na-egbuke egbuke mgbe ndabere na arụmọrụ dị oke egwu. Okpukpo ugbo ogbagba nke ejiri gbasaa emetere 19,500 lumens nke dị jụụ, eke, ma ọ bụ ọkụ na-acha ọcha ọkụ na atụmatụ 1-10V dimming. N'ihe dị ka 150 watts, ihe mkpuchi a na-eji ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nwere ihe yiri mgbatị metal-halide (MH) 400-watt. Na nyocha ndụ nke dị ugboro 3 ka MH fix-ọkụ ọkụ ọkụ na-ebelata ọnụ ala dị oké ọnụ na mkpa maka ngbanwe. Ejiri oghere ndị na-eme ka ogwe ọkụ na-adị na ya-ọ dị mma na-agbanye n'elu ogwe osisi, ma ọ bụ were ya na otu n'ime nhọrọ ntinye dị iche iche (rere iche) maka mgbidi, ụlọ elu, na n'akụkụ nke ogwe ma ọ bụ square. A na-eji ọkụ ọkụ na - adọba ụgbọala a na- ere ahịa nke a na- ere ọkụ na -ekpuchi ọkụ ụlọ. Ebe anyị na- adọba ụgbọala na-eduzi anyị na-eme ka anyị ghọtakwuo ihe ndị anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị na- adọba ụgbọala, okporo ụzọ, ụgbọ ala, ụlọ ọrụ, ogige ntụrụndụ, na mgbanwo ọkụ na ọkụ ọkụ.
Dusk na Dawn Led Garage Light Enwetara ọkụ n'èzí Ebube ụgbọala na-ebugharị na Motion Fee DUsk ka Dawm Led Wall Pack 20W Led Garden Light UK Led Garden Yard Light Dlc Led Corn Light Led Garden Light Posts